Pineapple keke nekirimu - Thermomix Mapepa | ThermoRecipes
Chinangwa chinanazi nekirimu
Kudya157 maminitsi200 makarori
Iyo yakanaka keke yezhizha, yakatsva kwazvo, inokurumidza uye yakapusa. Nedu Thermomix tinogona kugadzira dhizeti iyi nematanho mashoma akareruka uye chichava chikafu chakanakira iwe kudzokorora kanopfuura kamwe.
Iyo haina huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa, isu tichafanira chete kushandisa chinanazi musirasi, gelatin, kirimu uye dzimwe sobaos sezvinhu zvikuru zvinoshandiswa kuitira kuti vagare pazasi pekeke.
Iyi kamukira haidi ovhoni futi, asi isu tinoshandisa nzira yegelatin kuitira kuti tigone kuidzikisa mufiriji. Enderera uye edza izvi zvinonaka, iri keke rine muto uye rinoshanda kwemazuva ano anopisa. Iwe unoda kuziva here kuti inoitwa sei nhanho nhanho? Iwe unogona kuzviona nekutarisa yedu demo vhidhiyo pazasi.
1 Chinangwa chinanazi nekirimu
Iyo yakasviba yakasviba uye nyowani keke yekutora muzhizha. Iyi dhizeti inogadzirwa kubva kune sobaos base, ine chinanazi-flavored kirimu nemapineapple zvimedu, chinofadza chaicho.
Nguva yekugadzirira: 2H 35M
Nguva yakazara: 2H 37M
500 ml yechando kirimu kurova
14-15 diki rectangular sobaos
2 hari diki dzeinanazi nesirasi yayo (approx. 227 g imwe neimwe)
1 envelope yeinanapple jelly
Mune square tray inoyera 22 × 22 cm uye ingangoita masendimita masere pakureba, tinoisa diki diki remvura caramel pazasi payo ndokuiparadzira nebrashi. Isu tinobvisa zvidimbu zvepainanapple musirasi uye tinochengetedza iyo syrup. Isu tinoisa zvidimbu zvepainapple pamusoro peiyo caramel uye tinochengetedza.
Mugirazi yedu yeThermomix tinoisa shavishavi uye tinowedzera 500 g yekurova kirimu uye iyo 125 g yeshuga. Tichazoirova inenge Masekonzi mashanu pakumhanya 45. Nguva yacho inoratidza nekuti sezvo iri kirimu hatikwanise kupfuura nguva yayo yekurova. Kana tichida imwezve poindi yekurova, tinozozvironga kwemamwe masekondi mashoma. Tinoisa kirimu parutivi mufiriji.
Mugirazi rimwe chete tinowedzera svutugadzike yepainapple uye hamvuropu yakashongedzwa neinanazi Isu tinozvironga panguva Maminetsi matanhatu pa2 ° nekumhanya 100. Kana imwe yakabikwa tinozoisiya ichizorora kuti itonhorere pasi usati wawedzera kirimu yakarova. Kuti ikurumidze kutonhora, unogona kuiisa mufiriji, asi usingaregi kuti igare.
Kamwe gelatin painotonhora, tinowedzera kamu cream uye tinoigadzirira Masekonzi mashanu pakumhanya 25.
Isu tinodururira musanganiswa mutireyi pamusoro peinanazi uye tinotsvedza pamusoro paro. Isu tinoisa sobaos pamusoro, tichisunda zvishoma nemaoko edu kuti anyure. Isu tinoriisa mufiriji yekuisa, ingangoita awa nehafu.
Kamwe kana keke ratsemurwa, isu tinobva tasunungura iro patray kana mundiro. Tichaona kuti chinanazi chakaiswa zvakanaka pamusoro pamwe neruvara rwebhuruu nekuda kweiyo caramel.
Tsvaga mamwe mabikirwo e: General, Desserts, Keke
Yakazara nzira kuchinyorwa: Thermorecetas » General » Chinangwa chinanazi nekirimu
Kirimu tsvuku mhiripiri, ine chizi nyowani uye bhinzi yegirini